Warbixin: Maxaa Somalia Ka Hortaagan Nidaamka Xisbiyada?
Dawladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in dalkan aysan ka dhici doonin doorasho hal qof iyo hal cod ah sababo kala duwan awgood, oo ay ku jirto tan xaaladda amniga ee waddanka iyo barnaamijyadii xilliga kala-guurka oo aan la dhammaystirin.
Haddaba barnaamijyada ay ahayd in la dhammeeyo balse dib u dhacay waxaa ka mid ah in doorashada sannadkan ay ku tartamaan xibsiyo.
Dhowaan ayaa Baarlamaanku ansixiyey sharciyadda aasaaska Xisbiyada taasina waxya sare u qaaday rajada mustaqbalka ee ururro badan oo doonaya in xisbiyo loo diiwaan geliyo si ay uga qaybqaataan siyaasadda iyo hoggaanka dalka.
Haddaba dib u dhaca ka yimid aasaaska sharciyada xisbiyada iyo nooca xisbiyada la iman kara aragti qaran ayaan idiinka diyaarinay warbixino ka kooban laba qaybood. Waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinayaa weriyahayaga Garoowe Nuux Muuse Birjeeb.
Maxaa diidan nidaamka xisbiyada Somalia